ရေပန်းစားသလောက် အောင်မြင်မှုမရတဲ့ အစဉ်အလာကို ချိုးဖြတ်ရမယ့် အင်္ဂလန်
19 Jun 2018 . 4:10 PM
ဘောလုံးလောကရဲ့ ဘိုးအေအသင်းလို့ တင်စားခံထားရတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီး တွေဆိုရင် ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားပေမယ့် နောက်ဆုံးကျရင်တော့ မျှော်လင့်သလောက် ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ အဲဒီအစဉ်အလာကို ဒီတစ်ကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ချိုးဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၆၆ ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့တစ်ကြိမ် က လွဲပြီး ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တာက ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ စတုတ္ထရခဲ့တာပဲရှိပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် နာမည်ကြီးထမင်းငတ်ဖြစ်လေ့ရှိတာက အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရေပန်းစားနေ တဲ့စာရင်းမှာ တစ်သင်းအပါအ၀င်ဖြစ်နေတဲ့ အင်္ဂလန်တို့ အခုနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာ မထင်မှတ်တာတွေ လုပ်ပြနိုင်မှာ လား . . .
အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ ကနေ ၁၉၃၈ ခုနှစ်အထိ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၁၉၅၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၇၀ ဆက်တိုက် ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ မှာတော့ ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၈ ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ ခြေစစ်ပွဲ မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ ၁၉၈၂မှာ အုပ်စုဒုတိယအဆင့်၊ ၁၉၈၆ မှာ ကွာတားဖိုင်နယ်၊ ၁၉၉၀ မှာ စတုတ္ထနေရာတွေရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၉၄ မှာ ခြေစစ်ပွဲမအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉၈ ကစပြီး အခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ တောက်လျှောက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား(၅)ကြိမ်မှာ ကွာတားဖိုင်နယ်(၂)ကြိမ် (၂၀၀၂၊ ၂၀၀၆)တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလန်အသင်းဟာလည်း တခြား ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေလို ခြေစစ်ပွဲ အုပ်စုအဆင့်မှာ အခက်အခဲမရှိဘဲ အုပ်စုပထမနဲ့တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ အုပ်စုတွင်းမှာ ဆလိုဗက်ကီးယား၊ စကော့တလန်၊ ဆလိုဗေးနီးယားတို့လို ခြေစွမ်းမာကျောတဲ့အသင်းတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပေမယ့် အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး (၈)ပွဲနိုင် (၂)ပွဲသရေ ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခြေစစ်ပွဲအစပိုင်းမှာ နည်းပြအလာဒိုက်စ် Allardyce ရဲ့အ ရှုပ် အထွေးတွေကြောင့် ကစားသမားဟောင်း ဆောက်ဂိတ် Southgate ကို FA က နည်းပြသစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ဆောက်ဂိတ်လက်ထက်မှာလည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ စပါးအသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟာရီကိန်း Harry Kane ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းတိုက်စစ်ကို အဓိက ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဗာဒီ Vardy၊ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Rushford တို့ရှိနေတဲ့ တိုက်စစ်က တောင့်တင်းနေဆဲပါ။ ကွင်းလယ်မှာတော့ World Class အဆင့်ကစားသမားမရှိဘဲ အယ်လီ Alli၊ စတာလင် Sterling၊ လင်ဂတ် Lingard၊ ဟန်ဒါဆင် Hendersonတို့ရဲ့ စုဖွဲ့မှုက သာမန်အဆင့်သာရှိပါတယ်။ လီဗာပူးလ်ကွင်းလယ်လူ ချိန်ဘာလိန် Chamberlain ကတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် ပြိုင်ပွဲနဲ့ လွဲချော်မှာပါ။ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် နောက်ထပ်အားနည်းတဲ့နေရာက ခံစစ်နဲ့ ဂိုးသမားနေရာဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းအဆင့်ကစားသမားတွေ မရှိပါဘူး။
ရပေနျးစားသလောကျ အောငျမွငျမှုမရတဲ့ အစဉျအလာကို ခြိုးဖွတျရမယျ့ အင်ျဂလနျ
ဘောလုံးလောကရဲ့ ဘိုးအအေသငျးလို့ တငျစားခံထားရတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကွီး တှဆေိုရငျ ပွိုငျပှဲမတိုငျခငျ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားပမေယျ့ နောကျဆုံးကရြငျတော့ မြှျောလငျ့သလောကျ ဖွဈမလာခဲ့ဘူး။ အဲဒီအစဉျအလာကို ဒီတဈကွိမျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ခြိုးဖွတျနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ အိမျရှငျအဖွဈ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၆၆ ပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့တဈကွိမျ က လှဲပွီး ကနျြတဲ့ပွိုငျပှဲတှမှော အမွငျ့ဆုံးရရှိခဲ့တာက ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ စတုတ်ထရခဲ့တာပဲရှိပါတယျ။ ခတျေအဆကျဆကျမှာ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ ပျေါထှကျခဲ့ဖူးပမေယျ့ နာမညျကွီးထမငျးငတျဖွဈလရှေိ့တာက အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ထုံးစံလိုဖွဈနပေါပွီ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ ခနျြပီယံဖွဈဖို့ ရပေနျးစားနေ တဲ့စာရငျးမှာ တဈသငျးအပါအဝငျဖွဈနတေဲ့ အင်ျဂလနျတို့ အခုနှဈပွိုငျပှဲမှာ မထငျမှတျတာတှေ လုပျပွနိုငျမှာ လား . . .
အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲစတငျကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ ကနေ ၁၉၃၈ ခုနှဈအထိ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးမရှိဘဲ ၁၉၅၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပထမဆုံးအကွိမျခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့တယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျး ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၇၀ ဆကျတိုကျ ခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့ပွီး ၁၉၆၆ မှာတော့ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူး နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၈ ပွိုငျပှဲတှမှောတော့ ခွစေဈပှဲ မအောငျမွငျခဲ့ဘဲ ၁၉၈၂မှာ အုပျစုဒုတိယအဆငျ့၊ ၁၉၈၆ မှာ ကှာတားဖိုငျနယျ၊ ၁၉၉၀ မှာ စတုတ်ထနရောတှရေယူနိုငျခဲ့တယျ။ ၁၉၉၄ မှာ ခွစေဈပှဲမအောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ ၁၉၉၈ ကစပွီး အခုအခြိနျအထိ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ တောကျလြှောကျ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရခဲ့တယျ။ပွီးခဲ့တဲ့ကမ်ဘာ့ဖလား(၅)ကွိမျမှာ ကှာတားဖိုငျနယျ(၂)ကွိမျ (၂၀၀၂၊ ၂၀၀၆)တကျရောကျနိုငျခဲ့တယျ။
အင်ျဂလနျအသငျးဟာလညျး တခွား ဥရောပထိပျသီးအသငျးတှလေို ခွစေဈပှဲ အုပျစုအဆငျ့မှာ အခကျအခဲမရှိဘဲ အုပျစုပထမနဲ့တိုကျရိုကျခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့တယျ။ အုပျစုတှငျးမှာ ဆလိုဗကျကီးယား၊ စကော့တလနျ၊ ဆလိုဗေးနီးယားတို့လို ခွစှေမျးမာကြောတဲ့အသငျးတှနေဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပမေယျ့ အကောငျးဆုံးကြျောဖွတျခဲ့ပွီး (၈)ပှဲနိုငျ (၂)ပှဲသရေ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခွစေဈပှဲအစပိုငျးမှာ နညျးပွအလာဒိုကျဈ Allardyce ရဲ့အ ရှုပျ အထှေးတှကွေောငျ့ ကစားသမားဟောငျး ဆောကျဂိတျ Southgate ကို FA က နညျးပွသဈခနျ့အပျခဲ့ပွီး ဆောကျဂိတျလကျထကျမှာလညျး တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ရှဆေ့ကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီရာသီမှာ စပါးအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွဂိုးတှေ သှငျးယူခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူးဟာရီကိနျး Harry Kane ဟာ အင်ျဂလနျအသငျးတိုကျစဈကို အဓိက ဦးဆောငျသှားမှာဖွဈပွီး ဗာဒီ Vardy၊ ရပျရျှဖို့ဒျ Rushford တို့ရှိနတေဲ့ တိုကျစဈက တောငျ့တငျးနဆေဲပါ။ ကှငျးလယျမှာတော့ World Class အဆငျ့ကစားသမားမရှိဘဲ အယျလီ Alli၊ စတာလငျ Sterling၊ လငျဂတျ Lingard၊ ဟနျဒါဆငျ Hendersonတို့ရဲ့ စုဖှဲ့မှုက သာမနျအဆငျ့သာရှိပါတယျ။ လီဗာပူးလျကှငျးလယျလူ ခြိနျဘာလိနျ Chamberlain ကတော့ ဒဏျရာကွောငျ့ ပွိုငျပှဲနဲ့ လှဲခြျောမှာပါ။ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ နောကျထပျအားနညျးတဲ့နရောက ခံစဈနဲ့ ဂိုးသမားနရောဖွဈပွီး ထိပျတနျးအဆငျ့ကစားသမားတှေ မရှိပါဘူး။